Shirarka iyo Dhacdooyinka - Hay'adda Abaalmarinta Reward
Bogga ugu weyn Shirarka iyo Dhacdooyinka
Hay'adda Reward Foundation waxay gacan ka geysataa kor u qaadista wacyigelinta horumarka cilmi baarista muhiimka ah ee ku saabsan galmada iyo xiriirka jacaylka iyo dhibaatooyinka ay soo bandhigeen filimada internetka. Waxaan tan ku sameeynaa kaqaybqaadashada shirarka iyo dhacdooyinka, anaga oo wax barna isla markaana gacan ka geysaneyna la tashiga dowladda iyo warshadaha. Boggan waxaa lagu cusbooneysiiyay wararka meesha aad ka arki karto oo aad ka maqli karto Abaalmarinta Abaalmarinta.
Waa kuwan qaar ka mid ah tabarucaadkeenna…
TRF ee 2020
8 Febraayo 2020. Mary Sharpe ayaa soo bandhigtay fadhi ku saabsan Porn, Maskaxda iyo Habdhaqanka Galmada ee Waxyeellada leh ee Ururka Daaweynta Ku-Xad-gudubka Galmada iyo Shir-qasabka ee London.
18 Juun 2020. Mary Sharpe soo bandhigtay Istaraatiijiyado aan farsamo ahayn oo carruurta looga ilaaliyo filimada qaawan: La shaqeynta xirfadlayaasha Shirka Xaqiijinta Da'da.
23 July 2020. CESE Summit Global halkaas oo uu ka hadlay Darryl Mead Khariidad loogu talagalay cilmi-baarista mustaqbalka ee Isticmaalka Dhibaatooyinka Filimada.
27 July 2020. CESE Global Summit dood falanqeyn ku saabsan Qaadashada Porn-ka Weyn: Soo bandhigida Xadgudubka, Ka Ganacsi Galmo, iyo Dhibaatooyin. Mary Sharpe waxay garab istaagtay Laila Mickelwait oo ka socotay barnaamijka Exc Cry iyo Rachael Denhollander, oo ah qareen, bare iyo qoraa.
28 July 2020. CESE Summit Global halkaas oo Mary Sharpe ay ka hadashay Pornography Internetka iyo adeegsadayaasha leh Autistic Spectrum Disorder iyo Baahiyaha Waxbarashada Gaarka ah.
12 November 2020. Dooda wada hadalka Wadahadal lala yeeshay Mary Sharpe, The Reward Foundation iyo Farrer & Co LLP, London. Hadalka waxaa lagu casuumay inuu daboolo xiriirka ka dhexeeya isticmaalka filimada iyo ilaalinta carruurta iyo dhalinyarada.
TRF ee 2019
18 Juun 2019. Darryl Mead iyo Mary Sharpe ayaa soo bandhigay warqadda Iskuxirka "Manifesto ee shabakad cilmi baaris Yurub ah oo ku saabsan Isticmaalka Dhibaatada Internetka" baahiyaha kala duwan ee bulshooyinka xirfadlayaasha ah iyo macaamiisha ay saamaysay iyadoo dhibaato loo adeegsado filimada. Tani waxay ka dhacday Shirka Caalamiga ah ee Balwadaha Akhlaaqda ee Yokohama, Japan. Waxaan sidoo kale soo bandhignay warqad ku saabsanCaqabadaha baraya ardayda iskuulada ee ku saabsan cilmi baarista ku-takooridda akhlaaqda.
5 October 2019. Darryl Mead iyo Mary Sharpe ayaa daadihinayay dood ku saabsan Cilmi-baaris cusub oo ku saabsan sawir-gacmeedka qaawan ee internetka sida u-soo-qabashada habdhaqanka soo baxaya ee Ururka Horumarinta Shirka Caafimaadka Galmada ee St Louis, USA.
TRF ee 2018
7 March 2018. Mary Sharpe oo lagu soo bandhigay Saameynta xun ee shabakada internetka ee maskaxda dhallinyarada qolka Gray iyo qolalka xabsiyada: La kulanida baahiyaha maskaxda iyo garashada ee dhalinyarada nugul. Munaasabadan waxaa soo diyaarisay Xarunta dhalinyarada iyo cadaalada bulshada ee jaamacada Strathclyde ee Glasgow.
5 iyo 6 April 2018. Shirweynihii Caalamiga ahaa ee Galmada Isticmaalka Galmada ee Dhammaadka ee 2018 ee ka dhacay Virginia, USA, Darryl Mead ayaa warbixin ka siiyay Arimaha Waalidiinta ee UK iyo Mary Sharpe hoggaamiyey Shirka Xoogagga Caafimaadka & Cilmi-baarista Bulshada waxaa ka soo qaybgalay in ka badan ergooyinka 80 ee adduunka oo idil.
24 April 2018. TRF waxay soo gudbisay warqad wadajir ah Isgaarsiinta Sayniska ee Ku-Xeeleysiga Cybersex ee Muusikada ballaaran at Shirka Caalamiga ah ee 5th ee Ku-Xeeladaha Habdhaqanka ee Cologne, Jarmalka.
7 Juun 2018. Mary Sharpe waxay ku bixisay khudbad dadweyne ah Pornography Internet iyo Maskaxda Dhallinyarada at Lucy Cavendish College ee Jaamacadda Cambridge.
3 July 2018. Mary Sharpe waxay soo bandhigtay bandhig ficil ah oo ka dhacay magaalada London Dib-u-dhiska Rabshadaha Galmada iyo Dhibaatada u dhaxeysa Caruurta Iskuulka: Isku-dubarid Jawaab Weyn.
5 Oktoobar 2018. TRF ayaa soo bandhigtay warqadda “Fududeynta horumarinta galmada caafimaadka leh ee dhalinyarada”ee Ururka Horumarinta Shirka Caafimaadka Galmada ee Virginia Beach, USA.
TRF ee 2017
20 ilaa 22 Febraayo 2017. Mary Sharpe iyo Darryl Mead ayaa ka soo qayb galay Shirka Caalamiga ah ee 4th ee Ku-Xeeldinta Habdhaqanka ee Haifa ee Israel. Warbixinteena ku saabsan waraaqaha shirkan waxaa lagu daabacay wargeyska Dambiyada Dagaalka iyo Isku qasnaanta Jinsiga.
2 Maarso 2017. Anne Darling oo xubin ka ah gudida TRF ayaa soo bandhigtay seddex kulan oo ah barnaamijka TRF ee Barnaamijka Tiyaatarka Perth, iyadoo la gaarsiiyey dadka dhagaystayaasha ah ee 650.
19 September 2017. Mary Sharpe waxay siisay wada hadal ardayda waaweyn iyo waalidiinta loo yaqaan Waa maxay sababta xannaaneynta internetka porn loogu talagalay Bandhigga Fikradaha ee Kulliyadda George Watson ee Edinburgh.
7 Oktoobar 2017. Mary Sharpe iyo Darryl Mead Pornography Internet; Waxa Waalidiinta, Macallimiinta & Xirfadleyda Caafimaadka ay u baahan yihiin inay ogaadaan at the Maalinta Bulshada ee Bulshada ee Horumarinta Shirarka Caafimaadka Galmada ee Salt Lake City, USA.
13 Oktoobar 2017. Mary Sharpe iyo Darryl Mead Saameynta xun ee shabakada internetka ee ku saabsan caafimaadka maskaxda iyo jirka ee dhalinyarada oo loo yaqaan 'Society of Medical Surgery'.
21 Oktoobar 2017. Hay'adda Reward Foundation waxay ku soo bandhigtay laba muxaadaro iyo aqoon isweydaarsi ku saabsan filimada qaawan ee internetka Shirkii Saddexaad ee Caalamiga ahaa ee Qoyska ee ka dhacay magaalada Zagreb, Croatia.
16 November 2017. TRF waxay u horseedday seminaar habeenkii ah oo ku yaal Edinburgh Porn Kills Love. Saameyntii Pornography Internetka ee Maskaxda Dhallinyarada.
TRF ee 2016
18 iyo 19 April 2016. Mary Sharpe iyo Darryl Mead waxay soo bandhigeen aqoon isweydaarsi “Qaab isku dhafan oo loogu talagalay filimada Internetka iyo Saameyntiisa” oo ka tirsan Ururka Qaranka ee Daaweynta Cadaalad-xumada (Digniin) Shirwaynaha Scotland ee Stirling.
28 April 2016. Mary Sharpe iyo Darryl Mead waxay soo bandhigeen warqad "Muuqaalka sawirrada internetka iyo maskaxda dhallinyarada" Shirka OnlinePROTECT ee London “Kaliya waa khadka tooska ah, maahan?”: Dhallinyarada iyo internetka - laga soo bilaabo sahaminta galmada ilaa dabeecadaha galmada ee adag. . Mary Sharpe fariinteeda fiidiyowga ah ee guriga loo qaadanayo ee Shirka waa halkan.
4 May 2016. Waxaan soo bandhigay laba wargeys oo ka soo baxay Shirweynihii Saddexaad ee Caalamiga ah ee Tiknoolojiyadda, ee Istanbul, Turkiga. Mary Sharpe ayaa ka hadlay "Istaraatijiyadaha looga hortagayo Maandooriyaha Internetka ee Internetka" iyo Darryl Mead "Khataraha Dhallinyarada ay la kulmaan Macaamiisha Porno". Nooc dheer oo ka mid ah hadalka Darryl ayaa markii dambe lagu daabacay joornaalka asaasiga ah ee dib-u-eegista Addicta, waa la heli karaa halkan.
17-19 Juun 2016. Mary Sharpe iyo Darryl Mead waxay soo bandhigeen warqad cinwaankeedu yahay "Sida loogu beddelo Daawadayaasha Filimada Internetka Daawadeyaasha Macaamiil Macluumaad Leh" Shirkii DGSS ee Cilmi-baarista Galmada ee Cilmi-baarista Bulshada, "Jinsi ahaan Badeecad ahaan" oo ka dhacday Munich, Jarmalka.
7 September 2016. Mary Sharpe iyo Darryl Mead ayaa warqad ku soo qoray "Adeegsiga shirkad bulsheed si loogu soo bandhigo sawir-gacmeedka qaawan ee internetka sida arrimaha caafimaadka bulshada" Shirka Shirarka Cilmi-baarista ee Bulshada Caalamiga ah (ISIRC 2016) ee Glasgow. Sheeko warar ah oo ku saabsan shirkan waa halkan. Soojeedinteena waxaa laga heli karaa websaydhka ISIRC.
23 September 2016. Mary Sharpe iyo Darryl Mead waxay soo bandhigeen aqoon isweydaarsi "Saamaynta burburka ee filimada internetka" oo ka socda Ururka Bulshada ee Horumarinta Shirka Galmada Caafimaadka ee Austin, Texas. Sheeko warar ah oo ku saabsan arrintan halkan. Diiwaangelinta maqalka ah ee bandhigga ayaa diyaar u ah soo dejinta Website-ka SASH ee loogu talagalay US $ 10.00. Waa Lambarka 34 ee foomka dalabka.
29 September 2016. Mary Sharpe iyo Darryl Mead ayaa warqad ku soo qoray "Internet Pornography iyo Rabshadaha Galmada ee Dhallinyarada: Dib u Eegida Baaritaanada Caalamiga ah ee dhawaan" at Shirwaynaha Caalamiga ah ee Nota ee Brighton. Eeg MAALIN faahfaahinta shirka. Warbixinteena oo ku saabsan shirka waa halkan.
25 Oktoobar 2016. Mary Sharpe soo bandhigtay "Muuqaalka internetka iyo maskaxda dhalinyarada" at badbaadada khadka tooska ah ee carruurta iyo dhalinyarada ee Edinburgh oo ay dhigeen Dhacdooyinka Holyrood. Guji halkan warbixinteena.
29 November 2016. Mary Sharpe iyo Darryl Mead ayaa ka hadlay "Dhibaateynta galmada iyo rabshadaha galmada ee dugsiyada", dhacdo lagu dhigay magaalada Edinburgh oo ay dejisay siyaasad Hub Scotland. Warbixinteenna munaasabadda waa halkan.